Daawo Sawirada: Weerarkii Ismiidaaminta ee maanta lagu qaaday Ciidamada Jabuuti ee ku sugan Baladweyne – Xeernews24
Daawo Sawirada: Weerarkii Ismiidaaminta ee maanta lagu qaaday Ciidamada Jabuuti ee ku sugan Baladweyne
25. Oktober 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax ismiidaamin ah oo maanta lagu weeraray saldhig ay Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dalka Jabuuti ku leeyihiin Xaafada Howl-Wadaag ee galbeedka magaalada Baladweyne.
Qaraxa ayaa loo adeegsaday gaadhi nuuca xamuulka qaada ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kor laga soo saaray bal, waxaana gaadhiga oo si xowli ah u socday uu ku qarxay afaafka hore ee saldhig ciidamada AMISOM ku leeyihiin Xaafada Howl-Wadaag.
In la xaqiijiyay shan qof oo labo kamid ah ay yihiin ciidamada Jabuuti ayaa qaraxan ku dhintay, waxaa dadka kale ee dhintay la sheegay in ay ahaayeen dad shacab ah oo ka agdhawaa halka uu ka hacay qaraxa ismiidaaminta ah.
Afhayeen u hadlay maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen labo askari tiro kalana ay ku dhaawacmeen, waxa uuna intaa raaciyay in qaraxaasi ay ciidamada ka hor tageyn uuna u dhicin sidii horey loo qorheeyay.
Fidhiidhka qaraxan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa gaadhay xaafado ku dhaw dhaw halka uu qaraxu ka dhacay, waxaana dad shacab ah oo ku dhaawacmay qaraxa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne.
Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkan ismiidaaminta ah ee lagu qaaday ciidamada AMISOM ee ku sugan Badalweyne, waxa ayna sheegteen Shabaab in weerarkaasi ku dileen ku dhawaad 20-askari oo katirsan Ciidamada AMISOM.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/Baladweyn.jpg 353 642 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-25 15:44:132016-10-25 15:44:13Daawo Sawirada: Weerarkii Ismiidaaminta ee maanta lagu qaaday Ciidamada Jabuuti ee ku sugan Baladweyne
Weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay saldhiga ciidamada Jabuuti ee Beledweyne Daawo Qarax lala Beegsaday Ciiddamadda Djibouti ee ku Sugan Baladweyn